About Us - Foshan Jingyi Furniture Industry Co., Ltd
Outdoor table chair
Foshan Yishan Jiushe Furniture Technology Co., Ltd. is a company specializing in the production of high-grade outdoor leisure furniture (mainly aluminum). The products are rich in style, beautiful in appearance, and exquisitely hand-crafted in the Americas, Europe and Australia.
It riri muna Shunde, mutsva guta maindasitiri dzokumaruwa of Pearl River Delta mhenderekedzo of China. It Anova zvinobetsera nzvimbo uye nyore kutakura. Zviri kumabvazuva kusvikira Pearl River, kumaodzanyemba Zhuhai, kumavirira Heshan, uye kuchamhembe Guangzhou. The 105 National Highway traverses nayo, uye Guangzhou-Shenzhen Expressway kwapfuura, uye nomucheka gang akapoteredzwa Chengbo uye Bilang.
Kambani rakaumbwa muna 2011. Pashure pemakore anopfuura 20 kushanda zvakaoma uye painstaking kuita, ari anotyisa kumusika makwikwi, sezvo nekambani pakafunuka kuramba richikura, ayo waivako kuramba kumuka, uye mumusika kuramba richikura. All tsvimbo kwekambani nguva dzose kugadzirira mumwe mangwana itsva, uye vanoedza kupa vatengi pamwe anogutsa basa pamwe nemasango unyanzvi uye yokufungidzira zvekunyanyisa.
Nhasi, boka rinongova sokupenya parera, kupenya Pearl River, achikwezva vaenzi vaibva munyika yose ine zvayo akasiyana wemashiripiti.
Production ndiwo musimboti asika purofiti. Kuti ape vashandi vose utano uye inofadza kugadzirwa zvakatipoteredza, Jingyi Company achingoramba ari tenet kuti "yakabudirira kugadzirwa, kuchengeteka pakutanga" uye anoita yayo yakanakisisa.
Mukurima, kambani anokurudzira utsanzi. The kambani anopa pakunamata uye zvinhu kukurudzira vashandi vose vakaita zvinokosha mipiro kuronga kugadzirwa. Chekambani kugadzirwa inoomerera kwemaawa masere basa gadziriro kuitira kuti vashandi vashande nokuzorora uye kuzorora. Panguva iyoyowo, kambani uyewo muAtlantic motokari chaiwo zviite mudonzvo kuenda kubasa; simbisa moto nepasipo, kuyeuchidza vashandi varege kukanganwa kugadzirwa vakachengeteka; dzika kurovedza idzva yekosi pamberi vanodzidziswa, vashandi vatsva uye nemakanzuru basa zvakanaka madhipatimendi vashandi vatsva vasati vapinda fekitari Training kuvandudza zvinonyatsorehwa kunaka boka; vakapakata ano hofisi nematurusi kuvandudza basa kunyatsoshanda; dzose kuparadzirwa zvokuyamura basa inishuwarenzi, inosimudzira vashandi 'rugare rwepfungwa kubereka ...
Zvose izvi zvakananga runovimbisa vakarongeka uye zvakarongeka mudzimu nekambani kugadzirwa.
Upenyu uye kugadzirwa zvakabatana. Kuti kuvandudza upenyu mudonzvo, Jingyi Company hwakavaka mudonzvo dhomitari uye utano resitorendi pamwe mahwindo kwazvo uye yakachena, pool uye yakafarikana uye akakodzera yemitambo pasi munzvimbo mupenyu kwomudonzvo.
Kunewo zvakasiyana paruzhinji zvivako munharaunda mupenyu: mabhaisikopo, raibhurari, nutty imba, chipatara, Internet Datenroku, tafura tenesi Billiard nzvimbo, TV, runhare, yemagetsi kurudza rezuva mvura hita hurongwa ... kupfumisa upenyu vashandi panze kushanda, wedzera Staff kutaurirana. Edza kuumba musha-kufanana manzwiro vashandi venyu.
Munharaunda mupenyu, hama zhinji nehanzvadzi rose semhuri. Munhu wose kazhinji unosimudzira exchanges uye kuwedzera kunzwisisa kuburikidza siyana tsika mabasa (akadai pagore Mid-Autumn Festival, Day Gore Idzva, uye Women Zuva). Kuva zvinoita vanhu vanonzwa kufara uye kudziya.
Address: Room 2-13, jiuwan itsva maindasitiri vematunhu, Cha Chung guta, beijiao guta, shunde dunhu, foshan guta, guangdong dunhu
Modern Outdoor Furniture, Outdoor Patio Table Chair, Outdoor Table Chairs, Outdoor Aluminum Table Chair, Garden Outdoor Table Chair, Outdoor table chair furniture,
Rova kupinda kunzvera kana ESC kuvhara